Isi zere ịbụ onye a ghọgburu mgbe ị gbazite ụlọ | Akụkọ Njem
Maria | | ulo, Atụmatụ
Iji nọrọ ụbọchị ole na ole, ịgbazite ụlọ bụ otu n'ime ihe ndị njem na-achọkarị. Ebe dị mma n'etiti, mma, mara mma ma dịkwa ọnụ ala bụ atụmatụ ndị a na-achọkarị ma a bịa na ịgbazite ego. Na ịntanetị enwere ọtụtụ ebe nrụọrụ weebụ na-enye enweghị oke nke ụlọ nke ụdị niile mana dịka ilu a ma ama na-ekwu 'ihe niile na-egbuke egbuke abụghị ọla edo', yabụ ị ga-akpachara anya iji zere ịbụ onye a ghọgburu mgbe ị na-akwụ ụgwọ ụlọ.
Iji zere ịbụ onye aghụghọ, anyị na-adụ gị ọdụ ka ị gụọ ndụmọdụ ndị a ga-abụ ezigbo enyemaka mgbe ị na-akwụ ụgwọ ezumike ụlọ.
1 Ozi kọntaktị ndị ọzọ
2 Gaa n'ụlọ ahụ
3 Tụlee ọnụ ahịa
4 Nkezi ego na mpaghara
5 Lelee ihe ndị ọzọ kwuru
6 Ohere nke ịkagbu ndoputa
7 Debanye nkwekọrịta
8 Na-akwụ ụgwọ mgbe niile
9 Lelee ngwa ahịa
10 Kpachara anya maka ngwa ngwa
Ozi kọntaktị ndị ọzọ
Otu ihe ga-enyere anyị aka ime ka anyị mata wayo bụ na onye nwe ya kwuru na ya bi ná mba ọzọ nakwa na ọ gaghị egosi anyị ụlọ ahụ n'onwe anyị ma ọ bụ na ọ ga-ezitere anyị mkpịsị ugodi ahụ. Ọ bụrụ na ụdị ihe a emee, anyị ga-enyo enyo n'ihi na n'ọnọdụ ndị a, ọ bụ ihe dị mma maka onye nwe ya ịnwe ọrụ nke onye nnọchi anya ụlọ ọrụ nwere igodo ụlọ ahụ. ma ọ bụ site n’enyemaka nke onye a na-ahụ anya iji rụọ ọrụ ahụ.
Gaa n'ụlọ ahụ
Y’oburu na inwere ohere ileta ulo tupu agbazite ya, odi nma ka ime ya. N'ụzọ dị otú a, ị ga-ahụrịrị na ụlọ ahụ n'ezie nwere akụrụngwa ekpughere na mgbasa ozi. Ọ bụrụ na nhọrọ a agaghị ekwe omume, ọ kachasị mma ka gị na onye nwe ya kparịta ụka ma gwa ya ka o zitere gị ụfọdụ onyonyo nke ụlọ ndị dị n'ụlọ ahụ: ime ụlọ, arịa ụlọ, ngwa, wdg.
Nwee enyo ma ọ bụrụ na ị chọpụta na e depụtaghachiri foto nke ụlọ ahụ na weebụsaịtị ọzọ, ọ bụrụ na ha nwere akara mmiri ma ọ bụ ọ bụrụ na ha yiri ndị ị hụrụ na mgbasa ozi ndị ọzọ.
Tụlee ọnụ ahịa
Tupu ị nweta ego, ọ ga-adị mma ma ị jiri ọnụ ahịa tụnyere websaịtị dị iche iche. A na-ejikọkarị ndị ala na ọnọdụ ndị siri ike na enweghị mgbanwe. Kpachara anya banyere ahịa na mgbasa ozi na-enweghị foto.
Nkezi ego na mpaghara
Gbaa mbọ hụ na ị maara ego ọnụahịa nke ebe ụlọ ahụ dị iji mara ma ihe ị ga-akwụ ọ dabara n’ihe onye nwe ụlọ na-arịọ. Ọ bara uru iji Google Images iji hụ ma ihe oyiyi e zigara gị dabara adaba. N'ụzọ dị otú a, ị ga-enwe ike ịlele anya n'etiti ebe mmasị na obodo na ụlọ (ebe ntụrụndụ, obodo ochie, ụsọ osimiri ...).
Lelee ihe ndị ọzọ kwuru
Tupu ị gbazite ụlọ ahụ, ọ dị mma ịgụ echiche nke ndị ọrụ ndị ọzọ gbasara ụlọ ndị njem. Ahụmahụ nke ndị ọzọ nwere ike inye anyị echiche banyere ihe anyị ga-akwụ ụgwọ na ihe anyị ga-achọta mgbe ha nyere anyị mkpịsị ugodi.
Ohere nke ịkagbu ndoputa
N'echiche na ị na-ejikarị ede akwụkwọ ebe obibi gị tupu oge eruo, ihe kachasị mma bụ na ịnwa ịkwado ohere ịkagbu ndoputa ahụ n'ime oge ụfọdụ na-enweghị mmefu mmefu. Maghị ihe ọhụụ ị nwere ike ịnwe mgbe ị na-akwụ ụgwọ ogologo oge.
Banye na mgbazinye ụlọ na-eme ka ihe dị mfe mgbe niile ma ọ bụrụ na ha jọrọ njọ. N'ime nkwekọrịta a ị ga-egosiputa ụbọchị ndị ọnụnọ ahụ ga-adịru, ego nke mgbazinye na ọbụlagodi nke nkwụnye ego ma ọ bụ nkwụnye ego ahụ.
Na-akwụ ụgwọ mgbe niile
Nwere ike zere a ghọgburu mgbe ịgbazite ulo site na-akwụ ugwo n'enweghị nsogbu. Atụkwasịla obi ma ọ bụrụ na onye nwe ebubo ahụ rịọrọ ka a kwụọ ụgwọ maka ọrụ ndị a na-amaghị aha n'ihi na ịme nke a ga-esiri nnọọ ike iweghachite ya. Ihe kachasị mma bụ ịkwụ ụgwọ site na kaadị ma ọ bụ nyefee ụlọ akụ ebe ọ bụ na ụlọ akụ nwere ike ịkagbu ọrụ ahụ.
Lelee kwa na ụlọ akụ nke a ga-ezigara azụmahịa ahụ bụ otu mba dị ka onye nwe ụlọ ahụ na onye nwe akaụntụ ebe ego ahụ dị bụ nke onye nwe ụlọ ahụ.
Lelee ngwa ahịa
Mgbe ụfọdụ site na iji mkpịsị ugodi ahụ na-enyekwa ngwongwo nke a na-achịkọta arịa ụlọ na ihe ndị ọzọ eji edozi ụlọ ahụ. Tupu ịbanye na nkwekọrịta ahụ, ọ ga-adị mma ka ị chọpụta na ụlọ ahụ nwere ihe niile ihe ndekọ ahụ kwuru ma, ọ bụrụ na ọ bụghị, gwa onye nwe ụkọ adịghị ike ndị ị hụrụ.
Kpachara anya maka ngwa ngwa
Ọsọ ngwa ngwa imechi nkwekọrịta kwesịrị itinye gị na mkpịsị ụkwụ gị. Ndị na-eme ihe ọjọọ na-achọ ime ya ngwa ngwa o kwere mee.
N'ikpeazụ, ọ bụrụ na ị tụlee na ihe ahụ akpọsara bụ aghụghọ ma ọ bụ na a ghọgburu gị na mkpesa ndị uwe ojii, ozi ị nyere ga-enye ha ohere ịnweta ozi ndị ọzọ gbasara ndị aghụghọ ahụ ma jide ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » njem » Atụmatụ » Isi zere ịbụ onye a ghọgburu mgbe ị na-akwụ ụgwọ ụlọ